Yakachipa Rotary Drum NPK Compound Fertilizer Granulator Machine Vanopa uye Fekitori | YiZheng
Chii chinonzi Rotary Drum Compound Fertilizer Granulator Machine?
Rotary Drum Komputa Fertilizer Granulator ndeimwe yemidziyo yakakosha muindasitiri yefetireza yemubatanidzwa. Iyo huru modhi yebasa kuperetera nemvura yakanyorova. Kubudikidza neimwe huwandu hwemvura kana hwemvura, fetiraiza yakakosha inoitwa nemushonga mumushonga mushure mekunyoroveswa. Mune chimwe chikamu chemvura, kufamba kutenderera kwebhari kunoshandiswa kugadzira kukanda kwekuwedzera kwezvinhu mumabhora. zvese NPK Compound fetiraiza granulation yekugadzira mutsara inosanganisira:
Maumbirwo eRotary Drum Compound Fertilizer Granulator
Muchina unogona kukamurwa muzvikamu zvishanu:
1) Chikamu chebracket: iyo muviri wese wemuviri chikamu chekutsigirwa nebracket, iro simba rakakura. Naizvozvo muchina une mavhiri furemu zvikamu zvinoshandiswa mune kabhoni simbi ndiro, yakasungwa negero, uye kuburikidza neyakaomarara mhando kudzora uye yakakosha Maitiro anodikanwa, yasvika chinangwa chekushandiswa kwemuchina. Pamusoro pekukosha kwakatarwa pamashalofu ekuchengetwa, nekuda kwekufunga muviri wayo mupumburu uchave nekukwesana kukuru, ini ndinodyara zvakasarudzika zvemhando yepamusoro kurwisa ngura, kupfeka-kusagadzikana zvinhu, kuvandudza zvakanyanya hupenyu hwe muchina, Imwe yacho inoshandiswa zvakare mukukanda rimwe remativi mana evhiri riine chirauro chakarembera, kurodha nyore uye kutakura kutakura.
2) Chikamu chekutakurisa: iyo yakazara granulator yekutyaira chikamu chakanakira iwo muviri wese webasa uine uyu mutsetse. Transmission furemu inogadzirwa yemhando yepamusoro yakasungwa simbi, uye kuburikidza neyakaomarara mhando zvinodiwa. Isa mune yekufambisa furemu Pane iyo huru mota uye yekudzora inosarudzwa ISO yenyika kusunungurwa zvigadzirwa, hwakavimbika mhando. Motokari inotyaira pulley, V-bhandi, chinodzora kutapudza kune chokurukisa, kuitira kuti muviri ushande, unofambisa chinodzora muchikamu chebato chebasa, kushandiswa kwenylon nyora chinongedzo chikamu kuruma Chinjana dhiraivha.
3) Huru giya: yakatarwa pamutumbi, uye hutapuro hwemapapiro egiya mazino, yakapesana kutyaira muviri basa, kushandiswa kwepamusoro-tech kusakara-kusagadzikana zvinhu, kuti muchina uwedzere hupenyu.
4) Roller: yakatarwa pamativi ese emuviri kutsigira muviri wese.
5) Chikamu chemuviri: iyo granulator yese chikamu chakakosha kwazvo chemuviri, icho chakagadzirwa nemhando yepamusoro kabhoni simbi ndiro yakasungirirwa, yakavakirwa-mukati yakakosha yerabha liner kana asidi-inodzivirira simbi isina simbi liner, kuti uwane mavanga otomatiki, kubva pabundu. , kukanzura chinyakare chinotsvaira chishandiso, uye kuburikidza neyakaomarara mhando kudzora uye yakakosha maitiro anodikanwa kuti uwane chinangwa chemuchina unoshandiswa.
Chinhu che Rotary Drum Compound Fertilizer Granulator
1. Chiyero chegranulate chinosvika ku70%, inongova shoma shoma yekudzoka, kudzosera chigadzirwa saizi diki, inogona kugadzirwa zvakare.
2. Isa mukati mekupisa kwemhepo, gadziridza tembiricha yezvinhu, izvo zvinhu mubhora mushure mekunge mvura iri shoma, kugadzirisa kushanda zvakanaka;
3. nerabha mainjiniya epurasitiki ekumisikidza, mbishi zvinhu hazvisi nyore kunamira, uye zvinoita chinzvimbo mukupokana-ngura kuputira;
4. Yakakura kuburitsa, yakaderera simba kushandisa, yakaderera yekuchengetedza mutengo.
Ziva Zvakawanda Nezve NPK Compound Fertilizer Rotary Drum Granulation Production Maitiro
Compound fetiraiza yaigadzirwa nedhiramu granulation. Fetereza yemubatanidzwa inogona kupa zvinovaka muviri kune zvirimwa nenzira yakatenderera. Iyo nzira ndeyemakemikari kuburitsa izvo zvakakosha zvinovaka muviri (senge N, P, K uye zvimwe zvinoteedzera) zvinodiwa nezvirimwa, ine nitrogen, phosphorus, potasium uye zvimwe zvinhu zvemakemikari zvakakodzera kurimwa kwezviyo zviyo, uyezve kuburikidza nekuiswa kwezvirimwa ivhu. Fudza zvinovaka muviri kubva muvhu. Musimboti weichi chiitiko unosanganisira nitrogen, phosphorus, potassium particles, ammonium sulphate particles, calcium hydrogen phosphate particles uye yakavhenganiswa mafetiraiza: chekutanga, phosphorus fetiraiza (inozivikanwa nesainzi se "calcium superphosphate") inoratidzirwa; akasiyana-siyana powdery mbishi zvigadzirwa zvakavezwa granulated, yakaomeswa uye inotonhorera kuburitsa apedza komputa fetiraiza. Iyo tekinoroji maitiro ekomboni fotereza yekugadzira mutsara inogona kukamurwa kuita mbishi yezvinhu chinogadzirwa, mbishi zvinhu zvinosanganiswa, mbishi zvinhu granulation, kudonha kwesvutugadzike, kutonhorera kwechetere, kudhiraina, kupedzisa chigadzirwa kupfeka uye yekupedzisira chigadzirwa kurongedza.
Rotary Drum Komputa Fertilizer Granulator Vhidhiyo Ratidza
Rotary Drum Komputa Fertilizer Granulator Model Sarudzo
Pashure: Nyowani Type Organic Fertilizer Granulator
Zvadaro: Disc Organic & Remubatanidzwa Fertilizer Granulator
Nhanganyaya Chii chinonzi Semi-wet Material Kupwanya Machine? Iyo Semi-yakanyorovera Chinyorwa Kupwanya Muchina inyanzvi yekupwanya michina yezvinhu zvine hunyoro hwakakwira uye yakawanda-fiber. Iyo Yakakwira Nyoroza Fertilizer Kupwanya Machine inotora iwo maviri-epanzvimbo rotors, zvinoreva kuti ine kumusoro uye pasi maviri-nhanho kupwanya. Kana iyo mbichana iri fe ...